Hetsika “Ady jamala” : saron’ny zandary ny rongony iray taonina mahery | NewsMada
Manomboka mahazo vahana tato ho ato ny voly rongony manerana ny Nosy. Efa nisy ireo tratra, saingy efa hatrany koa ny miforona. Ao anatin’izany mpamboly, ny mpanondrana. Anisan’izany ny fototra rongony an’hetsiny tratra tao Ambanja sy tao Ambilobe.
150 000 foto-drongony milanja 1,680 taonina ny tra-tehaky ny zandary nandritra ny hetsika « Ady jamala », naharitra folo andro tao Mevadoany-Mahadera, kaominina Marotolàna, distrikan’Ambanja. Araka ny loharanom-baovao, tany mirefy 20 ha ny tany nahitana ity voly ity, ny herinandro lasa teo iny, raha rongony maina milanja 1,300 taonina kosa ny hita tao amin’ny kaominina Anaborano Ifasy, distrikan’Ambilobe, nokasain’olon-tsy fantatra hamidy.
Raha ny fanazavan’ny kapiteny Samatasy Herimampisaina, kaomandin’ny zandarimarian’Ambilobe, nahita olona tao Marotolàna ireo zandary ireo nandritra ny fisafoana ka nitsoaka avy hatrany ireto farany raha vantany vao nahita ireo zandary. Nohamafisin’ity kapiteny ity tamin’ny antso an-telefonina fa tamina toerana lavitry ny tanàna avokoa ny nahitana ireto rongony nandritra ny dia an-tongotra naharitra dimy andro teo ho eo. Raha totalina, hoy izy ireo ireo rongony ireo, milanja 2,980 taonina.
Velaran-tany rakotra voly rongony
Araka ny fantatra, nodorana teo anatrehan’ny lehiben’ny distrika sy ny fitsarana ary ny sefo fokontany ireo rongony ireo rehefa vita ny taratasy rehetra momba izany, ny zoma teo. Mbola mitohy kosa ny hetsika famongorana ny asa ratsy sy ny loza mitatao amin’ny fiarahamonina momba ity zava-mahadomelina ity, raha ny fanazavana voaray. Nohamafisiny fa anisan’ny tanjona apetraky ny zandary ankehitriny ny fanafoanana ny fambolena izany ary mbola mitohy hatrany ny hetsika. Araka ny angom-baovao voaray, fantatra fa misy saha sy sompitra lehibe iray hopotehin’ireo zandary, aoriana kely ao.
Tsiahivina fa efa nisy ny fahatrarana ny tanin-drongony mirefy 145 ha tao amin’ny kaominina Itampolo, distrikan’Ampanihy Andrefana, ny tapatapaky ny volana jolay teo, raha 120 ha kosa tao amin’ny kaominina Ankamenaha, ary 25 ha ny tao amin’ny kaominina Ampitanaky. Mankasitraka ny ezaka ataon’ireo zandary any an-toerana ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria sy ny Kaomandin’ny zandarimariam-pirenena.